Poltava Medical & ilkaha Academy - Xarunta Admission International
MSA inoo dooran
dhacdo MSA aqoonsan yahay
waxbarashada Wiilka Sare
Macluumaad Visa ina
Yukreeniyaan Medical Academy & ilkaha
Yukreeniyaan Medical Academy & ilkaha waa mid ka mid ah ugu wanaagsan
jaamacadaha caafimaadka ee Ukraine iyo Yurub ee ardayda ajnabiga ah.
Yukreeniyaan Medical & ilkaha Academy waa jaamacad fiican ee Medicine waxbarasho / MBBS ee Ukraine
Welcome To Yukreeniyaan Medical Academy & ilkaha
fiiga waxbaridda hooseeyo
Poltava Yukreeniyaan Medical Academy & Stomatological (Border ama ina),waa mid ka mid ah jaamacadaha caafimaadka ee USSR hore ugu weyn oo ugu wanaagsan.
Tan iyo markaas, ka badan 40,000 dhakhaatiir xirfad sare leh, saynisyahano si fiican u yaqaan, cilmi, qabanqaabiyayaasha adeegga caafimaadka ka Ukraine, Russia, dalalka kale ee Yurub, Asian, dal oo Afrikaan ah oo American ah ayaa ka qalin UMDA.
Maxaad daawo waxbarasho
Ukraine leedahay wax badan oo ka mid ah faa'iidooyinka qurux badan loogu talagalay ardayda ajnabiga ah. First of dhan, Ukraine ayaa ujrooyinka ugu hooseeya ee Europe, laakiin tayo sare ee waxbarashada
UMSA leeyahay Hawsha aqbalka fudud loogu talagalay ardayda ajnabiga ah. Uma baahnid in aad noqotay imtixaanada, IELTS ama TOEFL.
fariin Raktarka ee
A macalimiin heer sare ugu fiican xirfadeed, sidoo qalabaysan goobta waxbarasho iyo saldhigyadii caafimaad, lacag buugga gaarka ah ee maktabadda sayniska, helitaanka Internet, kaabayaasha horumaray ee campus ardayda 'Yaa ayaa xiiso u qarsoon ee nolosha - saacad helaan shaybaaro saynis, fursad ay ku shaqeeyaan qalabka gaar ah, fursad ay ku bartaan farsamooyinka casriga ah cilmi. Waan ku faraxsanahay ka mid ah taariikhda 80-sano, ay jaamacad, shaqaalaheeda, ay ka qalin la joogo iyo mustaqbalka!
Polatava waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu quruxda badan ee Ukraine. Waxaa ku dhow in ay ku sugan Kyiv (caasimada Ukraine). Halkan waxa aad ku arki doontaa dabeecadda yaab leh oo naqshadda dhismaha cajiibka ah. aad sugitaanka ee Poltava!
erayo ka ardayda
Waan jeclahay Poltava & I jecel UMSA. Waxaan ku faraxsanahay inaan qeyb ka mid ah ardayda this cajiib ah bulshada in Poltava Yukreeniyaan Medical Academy & ilkaha noqon ahay. Halkan waxaa ardayda badan ka hooyo Hindiya ah oo aan ka helay badan oo saaxiibo ka yimid wadamada kale
Waxaan ka baqay in ay dibadda ka baran, laakiin hadda aad ayaan ugu faraxsanahay in aan hadda ahay in UMSA ahay. Waan jeclahay jaamacad, magaalada, ardayda iyo macalimiinta. Waxaan ka helay badan oo aqoon iyo waxaan hubaa in aan mustaqbalka noqon doonaa dhalaalaya. Waad ku mahadsan tahay ina!
MSA news dambeeyay
Admission 2016 – mid aan aboor ku tagay
36024, Ukraine, Poltava, wadada Shevchenko,23
Poltava Yukreeniyaan Medical Academy & ilkaha waa jaamacadda ugu horeeysa caafimaadka ee Ukraine. Boqolaal ardayda ajinebiga halkan yimaado si ay waxbarashada caafimaadka, Mbbs, farmashiyaha, kalkaalinta iyo ilkaha sanad walba.
Ilkaha / Stomatology